दाङका ब्यबसायी निरञ्जन श्रेष्ठ नेकपा ओलि समुहमा प्रबेश ! - Jagaran Online
दाङका ब्यबसायी निरञ्जन श्रेष्ठ नेकपा ओलि समुहमा प्रबेश !
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ११:२६
दाङ । युबा ब्यबसायी निरञ्जन श्रेष्ठ नेकपा केपि ओलि समुहमा प्रबेश गरेका छन । कांग्रेस परित्याग गरेर श्रेष्ठ ओलि समुहमा प्रबेश गरेका हुन। दाङको घोराही घर भइ हाल काठमाडौं बस्दै आएका श्रेष्ठले आफू पार्टी प्रबेश गरेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको डिजिटल अभियानमा पनि आफू छानीएको बताए । उनि दाङका पुराना ब्यबसायी धर्मराज श्रेष्ठ भारीका जेठाे छोरा हुन । रास्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलिसहित पुगेका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री केपि ओलिले बालुवाटारमा पार्टी प्रबेश गराएका हुन । रास्ट्रिय सभा सदस्य वलिले पनि श्रेष्ठ प्रबेश गरेको बताइन ।